Biodiversity Vision - Biodiversity Extinction MG
Ny biodiversity dia manondro ny isan'ny sy ny karazan-java-misy ananantsika eto an-tany na koa eo an-toerana. Anisan'izany ny biby, zavamaniry, holatra, bakteria ary ahidrano.
Noho ny hetsika fanaon'ny olona dia mihena haingana izao tontolo izao ny zavamananaina, ka izay no hiheveran'ny olona azy ho hetsika mahafaty. Ny hetsika fandringanana faobe indrindra no maty rehefa maty ny dinosaurus. Azo heverina fa ny zavamananaina dia ho sitrana amin'ny endriny iray na amin'ny endriny hafa toy ny natao taorian'ny nahalany ilay dinôzôro, fa mety maharitra ela tokoa izany ary angamba tsy lasa talohan'ny nahavoa ny olombelona akory.
Tokony ho an'ireo taranaka ho avy isika mba hampitsaharana ity firoboroboana haingana ity ny biodiversity. Ny tontolo tsy misy ny biodiversity dia mankaleo ary mety hanohintohina ny fisiantsika mihitsy aza. Azo heverina fa ny fihanaky ny Coronavirus Covid19 dia vokatry ny tsy fahatomombanana tsy mitsaha-mitombo amin'ny natiora.
Amin'izao fotoana izao dia miharatsy haingana ny ankamaroan'ny endrika fiainana. Ny fahazarana izay mitaky fotoana ela hanarenana azy dia very. Mihena haingana ny fahasamihafana misy ny vorona, trondro, lolo sy ny bibikely hafa. Toy izany koa no azo lazaina ho an'ny fahasamihafan'ny zavamaniry sy biby isan-karazany, ao anatin'izany ny primatiora ary na ny biby an-trano aza.
Tato ho ato dia nisy fifantohana lehibe momba ny fiovan'ny toetr'andro. Saingy, na eo aza ny resaka rehetra sy ny teknolojia vaovao ampiasana tsara indrindra mba hiteraka herinaratra, dia tsy mihena ny fampiasana manerana an'izao tontolo izao amin'ny alikaola ary noho izany dia tsy mahomby ny ady atao amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Ny antony iray amin'izany dia ny fitomboan'ny mponina ao amin'ny planeta ary mihamitombo ny fanjifana ny tsirairay.
Ny fiovan'ny toetrandro dia iray amin'ireo fiantraikany amin'ny fahasamihafana misy karazany. Manoloana ny ady fandringanana amin'ny fiovan'ny toetrandro dia mila drafitra B isika na farafaharatsiny fepetra fanampiny hiarovana ny biodiversity. Izany no lohahevitra arahinay.
Misy fikambanana hafa mivoaka eo manao asa tsara, misy ny ady mandresy nefa resy ny ady amin'ny fahaverezan'ny zava-boajanahary. Te hanova an'izany izahay.
Ny drafitra lehibenay
hampiseho amin'ny mpanao politika fa tadiavin'ny olona ny tena vokatra ary
hiara-miasa amin'ny mpahay siansa sy ny fikambanana hafa mba hiatrehana ny lohany very amin'ny maha-biodiversity.
Azonao atao ny manampy anay hahatanteraka ny fahitantsika amin'ny fanaparitahana ny teny. Izany dia amin'ny alàlan'ny fizarana rohy sy famporisihana ny olona haneho ny fanohanany amin'ny fidirana (na dia izany aza no ataon'izy ireo) ary / na amin'ny fanoloran-tena sy / na fanomezana.